Shiinaha 8921 wax soo saareyaasha wax soo saarka polyurethane iyo alaab-qeybiyeyaasha | Huitiyaan
Xir qaboojiyaha baska, alxanka, shandadaha iyo qaybo kale. Samee maraakiibta, tareennada, dhismaha, ranjiga iyo warshadaha kale iyo adeegsiga kale ee awoodda isku-xirnaanta hooseeya.
Nafwaayay low, thixotropy wanaagsan: koolo waxaa lagu dabaqi karaa inta badan gacanta ama qoriga xabagta pneumatic.
Ilaalinta deegaanka: ur lahayn.
Awood isku xirnaan sare.
Waa la rinjiyeyn karaa
Caabbinta da'da ee gabowga.
Xalka alaabada oo dhameystiran: alaabooyin taxane ah oo loogu talagalay dhammaan dukaanada shaqada ee gawaarida.
* Taageerada tikniyoolajiyadda:
Shirkadeena waxay leedahay dhowr farsamo-yaqaanno sare oo ka jawaabi kara dhammaan noocyada su'aalaha habka loo adeegsado alaabada internetka. Isla mar ahaantaana, waxaan bixinnaa xirmo dhammaystiran oo xalalka gawaarida ee macaamiisha ah. Haddii loo baahdo, shirkadeena ayaa farsamo yaqaanno u direysa goobta ay macaamiisha ku isticmaalaan alaabada si ay ugu xalliyaan dhibaatooyinka macaamiisha.